Madaxweyne Faroole oo maantay dhagax-dhigay dhisme-cusub oo ay yeelanayso W/deegaanka Puntlnad. – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2012 2:13 g 0
Garowe, Oct, 31 – Madaxweynaha Dawladda Puntland C/raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud ?Faroole? ayaa maanta dhagax dhigay xarun weyn oo loo dhisayo wasaaradda deegaanka, daaqa iyo duur-joogta Puntland, dhismahaasi oo laga unkay duleedka-waqooyi ee magaalada Garowe.
Madaxweye Faroole ayaa guul-wayn ku tilmaamay higalinta dhismayaasha ay asadka u yeelanayaan hay?adaha dawladda, waxaana uu fariin-baraarujin ah u diray dhammaan hay?adaha dawladda, taasi oo ku aadan inay xooga-saraan sidii ay u gaari-lahaayeen isku-filnaansho dhinac-walba ah.
Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa ka hadlay xaalufka lagu hayo dhirta iyo ugaarta deegaanka, waxaana Dr Faroole oo hadalkiisa siiwata uu sheegay in xukuumadiisu ku dadaashay sidii ay u dhawri-lahayd deegaanka dabiiciga ah ee Puntland, inkastoo uu qiray baaba? wayn iyo xaalufin in lagu sameeyay deegaannada Puntland.
Wasiirka wasaaradda deegaanka daaqa iyo duur-joogta Puntland C/qani yuusuf Cadde ayaa qiray in in ay wasaaraddiisu horumar ka gaartay ilaalinta deegaanka, ?islamarkaana ay samaysay wacyigalin ballaaran oo lagu joojinayo xaalufinta deegaanka, iyo wacyigalin la xiriirta soo noolaynta dhirtii dabiiciga ahayd ee deegaanka.
Dhagax dhigga dhismahaan cusub ee wasaaradda deegaanka ayaa waxaa hirgalinteeda qayb ka ah hay?adda World Fishing, waxaana jira wali wasaaraddo badan oo wali ku jira guryo gaar loo leeyahay, inkastoo muddooyinkii dambe ay Garowe ka socotay hirgalinta dhismayaal laga unkay duleedka waqooyi ee Garowe, kuwasoo loo dhisayo hay?adaha dawliga ah qaar-kood.